Abavelisi beemveliso zekhompawundi - IiMveliso zeekhompawundi zase China abaXhasi kunye neFektri
Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd.Ukuthengiswa kweShishini:
Ukutya kwiBakala Agar
Ummeli ocacisa i-Wort
Inkqubela phambili yeNkampani
Isixhobo sokuCacisa iBhiya
Ijeli umgubo yenziwa carrageenan, intlaka konjac, iswekile kunye nezinye izinto ukutya ekrwada, sisisombululo ngqo ekwenzeni ijeli. Ngokusebenzisa i-carrageenan edityaniswe nezinye izinto, umgubo wejeli unokuba neempawu zokujiya, ukugcinwa kwamanzi kunye nokwenza ijeli ithambe ngakumbi. I-jelly powder luhlobo lwefayibha ephezulu yokutya enezinto ezinesinyibilikisi ezinesinyibilikisi samanzi, ethe yaqaphela umsebenzi wokhathalelo lwempilo ekhaya nakumazwe aphesheya. Inokukhupha ngokufanelekileyo iiathom zentsimbi kunye ne-radioactive i ...
Umgubo weswiti othambileyo uhlala uyijeli edibeneyo, efanayo nokusetyenziswa kwezithako zokutya kwijeli, esekwe kwi-agar esekwe kumgubo weelekese inamandla amakhulu e-gel. Kuyenzeka ukuba wenze iilekese ezithambileyo nge-gelatinization eyomeleleyo, ukucaca okuphezulu, ikristale ecacileyo, ukutyeba okuqinileyo kunye nokunambitheka okungadibanisi ngokudibanisa i-agar-agar, i-carrageenan kunye nezinye izinto. , ukungafihli nto, isixa esincinci esongeziweyo, ixabiso eliphantsi, uhlengahlengiso ...
Iarhente yokuCacisa iBhiya ikhutshiwe kumgangatho ophezulu wolwandle. Njengemveliso eluhlaza yendalo, ukhuseleko lwayo lwamkelwe nguMbutho weZolimo weZizwe eziManyeneyo. Ukusebenza kwe-arhente yokucacisa i-wort kukufunxa iprotein ye-wort, isuse i-nitrogen eguqukayo, yenze ibhiya icace kwaye ihlehlise ubomi beshelf ubhiya. Iarhente yokucacisa ibhiya ineentlobo ezimbini: igranules kunye nomgubo. Inempawu zokusetyenziswa okulula, iindleko eziphantsi kunye nefuthe elicacileyo, kwaye inokuphucula ngokufanelekileyo i-no ...
I-FUJIAN GLOBAL OCEAN BIOTECHNOLOGY CO., LTD
Ifowuni: 86-596-3558688, ngaphandle. 215
Ifowuni: 86-596-3558688, ext. 210
I-Fi iYurophu iya kubuyela kwi-30 kaNovemba-2 ...
I-Fi Yurophu 2019 -Izithako zokutya a ...
2019 FIC China International Ukutya Additiv ...
Umzantsi Melika (eBrazil) Ukutya kwamanye amazwe ...
I-22 iRussia yokutya kwamazwe aphesheya ...